Sambo tsy mety simba milentika any akaikin'ny Nosy Canary, olona 52 no maty
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sambo tsy mety simba milentika any akaikin'ny Nosy Canary, olona 52 no maty
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona iray monja no tafavoaka velona tamin'ny loza afrikanina tany anaty faritry ny nosy Espaniola.
Niondrana an-tsambo nosy Canary ny sambo mpifindra monina.
Nalefa tany amin'ny hopitaly ny olona iray sisa velona.
Olona 50 mahery no natahotra ny ho faty.
Raha ny filazan'ny Sampana mpamonjy voina an-dranomasina any Espana dia olona maherin'ny 50 no atahorana ho faty aorian'ny fiparitahan'ny sambo iray avy any Afrika tany amin'ny Ranomasimbe Atlantika tokony ho 135 km miala ny Nosy Canary Espaniola.
Vehivavy iray 30 taona no hany sisa velona ary voavonjy tamin'ny alakamisy avy teo am-pidinana, izay nandao an'i Afrika herinandro lasa izay nitondra mpifindra monina 53 sy mpitsoa-ponenana.
Sambo mpivarotra no nahita ny sambo atsimon'ny Canary Islands ary nampandrenesina ireo sampana vonjy taitra Espaniola.
Nifikitra tamin'ilay sambo nilentika ilay vehivavy niaraka tamina lehilahy maty iray sy vehivavy iray maty teo anilany, hoy ny tompon'andraikitra misahana ny famonjena.
Nilaza tamin'ny mpamonjy voina izy fa ny sambo inflatable dia nanomboka ny morontsiraka Sahara Andrefana ary ireo mpandeha dia avy any Ivory Coast.
Nentina tany amin'ny hopitaly tany Las Palmas, any amin'ny nosy Gran Canaria, ilay vehivavy.
Ny fahafatesan'ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana dia fahita any amin'ny faritra Atlantika izay manasaraka ny West Coast of Africa ary ny Nosy Canary any Espana saingy sambo-dranomasina eny amin'ny zotra no sarotra hamarinina, ary ny ankamaroan'ny fatin'ireo niharam-boina dia tsy nisy noraisina intsony.
Olona 250 farafahakeliny no maty teny amin'ny làlana ho any amin'ny vondronosy Espaniola tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny 2021, hoy ny masoivohon'ny Firenena Mikambana mifindra monina.